सरकार – Sudarshan Khabar
काठमाडाैं कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट […]
‘मैले सुनें अब तपाईं सुन्नुहोस्’
काठमाडौं। करिब समाधान भइसकेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि बल्झिएको छ । चार महिना लामो आन्तरिक विवाद समाधान गर्न सहमति गर्दै कार्यान्वयनको चरणमै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि पुनः विवाद बल्झिएको हो । कर्णालीको विवाद समाधान नहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि विवाद झन् बढेको छ । प्रधानमन्त्री […]
डाक्टर केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति , आज बिहान अनसन तोडिने
काठमाडौं २७ दिनदेखि अनसनरत डा गोविन्द केसीले आज आइतबार बिहान अनसत तोड्ने भएका छन् । शनिबार मध्यरातमा सरकारी वार्ता टोली र डाक्टर केसी पक्षीय वार्ता टोलीबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै केसीले अनसन तोड्ने भएका हुन् । ८ बुँदे सहमतिमा शिक्षा सचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डाक्टर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । […]
सरकार र अनसनरत डाक्टर केसी पक्षबीच सहमति , आजै अनसन तोडिने
काठमाडौं सरकारी वार्ता टोली र आमरण अनरनसत डा. गोविन्द केसीबीच सहमति भएको छ । दुबै वार्ता टोलीले सहमतिलाई औपचारिकता दिएपछि आजै अनसन तोड्ने तयारी रहेको उच्च स्रोतले बताएको छ । शिक्षा सचिव गोपी मैनाली र डा. जीवन क्षेत्री नेतृत्वको वार्ता टोली बिहीबार नै सहमति नजिक पुगिसकेका थिए । अाज शुक्रबार दुबै पक्षले आन्तरिक परामर्श गरेपछि […]